အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို PETG ID Card, PETG Material Card, PETG ပစ္စည်း ID ကိုကတ်, PETG Material Identification Card, PETG Material NFC Card, PETG ပစ္စည်း RFID Card ကို, PETG Material Smart Card, RFID PETG Card
ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်များ: အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ, အထူ, ပုံသဏ္ဌာန်(card or Prelam Inlay), IC chip ကို, RF အကြိမ်ရေ, ပုံနှိပ်ခြင်း, and other special production processes.
ပရိုတိုကောစံချိန်စံညွှန်းများ: က ISO 11785 / က ISO 11784, ISO ကို 14443 TypeA / B,, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6B / 6C
chip အကြိမ်ရေ: LF 125KHz / 134.2KHz / HF 13.56MHz / UHF 860 ~ 960MHz
chip အမျိုးအစား: MF S50 / S70, MF ULT10, MF ULT ကို C, ICODE2 SLI ကို / SLI ကို-S က / L-SLI ကို / SLIX, MF DesFi 2K / 4k / 8K, Ti2048, EM4102, EM4200, EM4305, EM4450, TK4100, T5557, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, FMl208 (စီပီယူ),စသည်တို့ကို.
Reading အကွာအဝေး: LF / HF 2.5 ~ 10cm
Operating အပူချိန်: -20℃ ~ + 80 ℃
ရှုထောင့်: က ISO စံကဒ် L85.6mm W54mm ×သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်,ပုံသဏ္ဌာန်
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်းများ / အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်း
The card made of PETG material has the advantages of impact resistance, high and low temperature resistance, antistatic, abrasion resistance, folding resistance, high strength, excellent oil and chemical resistance, and is not subject to erosion by acids, alkalis, and oil. Low flammability, good fire resistance, no combustion support, low smoke output, no harmful substances after burning. Suitable for credit cards, bank cards, prepaid cards, တဦးတည်းကတ် Solutions, smart ID cards, all-in-one cards, high-end packaging, high-end printing, စသည်တို့ကို.
အခြားသူများက: chip ဒေတာစတင်ခြင်း / စာဝှက်စနစ်, Variable Data, programed ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်အစင်း, လက်မှတ panel က, ဘားကုဒ်, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, ဖောင်းကြွ, DOD ကုဒ်, NBS ခုံးကုဒ်, Die-cut.
I am interested in your product PETG Material RFID Card, PETG ပစ္စည်း ID ကိုကတ်
prev: Polycarbonate ပစ္စည်း Card ကို, PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် RFID Card ကို